४० कटेपछि रमाउनेहरु: शेरबहादुरदेखि शेरधनसम्म – Nepal Press
विवाह ढिलो, प्रेम रसिलाे
४० कटेपछि रमाउनेहरु: शेरबहादुरदेखि शेरधनसम्म
‘ढिला विवाहले महिलालाई बढी प्रभाव पर्छ’
काठमाडौं । विवाहको लागि उपयुक्त उमेर कुन हो ? यसमा कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त छैन । व्यक्तिले आफ्नो अनुकुलताका आधारमा निर्णय लिनु नै उचित ठानिन्छ ।
आउनुस्, ढिला विवाह गर्ने केही पब्लिक फिगरहरुबारे छोटो चर्चा गरौं-
राणा खानदानकी आरजु देउवासँग शेरबहादुरले लगनगाँठो कसेका हुन् । उनीहरुबीच पनि उमेरको राम्रै अन्तर (करिब १५ वर्ष) छ । देउवाको विवाह हुँदाका बखत नेपालमा अहिलेजस्तो बग्रेल्ती मिडिया थिएनन् । सामाजिक सञ्जालको त कल्पना नै थिएन । तसर्थ हाइप्रोफाइलको विवाह धेरै ठूलो विषय बनेन ।
बलबहादुर विगतमा विभिन्न विवादमा पनि मुछिएका थिए । अहिले भने उनको खासै चर्चा छैन । नयाँ पुस्ताका धेरैले उनलाई चिन्दैनन् पनि ।
विसं १९९४ मा जन्मेका मोहनचन्द्र ०२८ सालमा भएको झापा विद्रोहका प्रमुख योद्धा थिए । झापा विद्रोहकै बखत पञ्चायत सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेपछि ०३० सालमा जेल परेका उनले १७ वर्ष जेलजीवन बिताए ।
जेलजीवन बिताउने क्रममा उनको भेट शिक्षक आन्दोलनबाट पक्राउ परेर एक महिना भैरहवा जेल बसेकी बालकुमारीसँग भेट भएको भयो । त्यसपछि आफन्तहरूको प्रस्तावमा उनीहरूको विवाह भएको थियो ।
जनवादी गायक रामेश पनि ४० वर्ष कटेपछि विवाह गर्नेमा पर्छन् । उनले ०४७ सालमा विवाह गरेका हुन् । विवाह गर्दा रामेशको उमेर ४५ वर्षको आसपास थियो ।
रामेशले पाल्पाकी लक्ष्मी श्रेष्ठसँग लगठगाँठो कसेका थिए । करिब ५८ अघिदेखि जनवादी गीतमार्फत उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा जागरण ल्याउन उनी लागिपरेका थिए । रामेश अहिले खासै चर्चामा छैनन्, तर उनले गाएका ‘गाउँ गाउँबाट उठ…’ देखि ‘गरिबको चमेली…’ लगायतका गीतहरु अहिले पनि चर्चित छन् ।
अभिनेता राजेश हमालले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश भएयता सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न हो, ‘विवाह कहिले गर्ने ?’ उत्तर दिँदा दिँदा उनी थाकिसकेका थिए । अन्ततः उनले यो प्रश्नलाई सदाको लागि टुंग्याइदिए, ०७१ साल माघमा ।
बिहेपछि राजेश र मधुको जीवन उल्लासमय रुपमा बितिरहेको छ । राजेश पछिल्लो समय चलचित्रमा खासै सक्रिय छैनन् । मधु पनि घरव्यवहारमै व्यस्त छिन् । अहिले राजेश हमाललाई सबैभन्दा सोधिने प्रश्न हो, सन्तान कहिले जन्माउने ?
आफ्नो विवाहका विषयमा प्रदीप भन्छन्, ‘हाम्रो समाजमा विवाह गर्न ढिला भयो भने विभिन्न टिका–टिप्पणी हुन्छन् । मलाई पनि विवाहका लागि आफन्त र परिवारबाट दबाब आइरहन्थ्यो । विवाहपछि पनि टिप्पणीहरू आइरहे । अहिले हाम्रो दाम्प्त्य जीवन सुखद् छ । दुवै जना खुसी छौं ।’
ऋषि धमला अत्यधिक बेफुर्सदी पत्रकार मानिन्छन् । फुर्सद कम भएकैले होला उनले विवाह गर्न पनि ढिला गरे ।
०३२ सालमा धादिङमा जन्मिएका धमलाको विवाह २०७१ सालमा भएको थियो । उनकी पत्नी एलिजा गौतम २०५० सालमा जन्मिएकी हुन् । ऋषि र एलिजाबीच १८ वर्षको अन्तर छ ।
उमेरले आधा शताब्दी टेक्न लागेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई हिजो मात्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । ४९ वर्षीया राईले २६ वर्ष कान्छी जाङ्मु शेर्पालाई दुलही बनाएका हुन् । २३ वर्षिया जाङ्मु सन् २०१८ कि मिस मंगोल हुन् ।
शेरधन र जाङ्मु केही समयदेखि प्रेममा थिए । छोरी उमेरकी केटीसँग बिहे गर्न लागेको भनेर शेरधनको ट्रोलसमेत भयो । कतिपयले चाहिँ मन मिलेपछि उमेरको अन्तरालले फरक नपर्ने भनेर उनको बचाउ गरेका छन् ।
विवाह एउटा सामाजिक संस्था वा सामाजिक अनुबन्धन हो । जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा विवाह जैविक आवश्यकता निदान गर्ने माध्यम पनि हो ।
उमेर ढल्किएपछि गरिने विवाहलाई ढिलो विवाहको रुपमा हेर्ने चलन छ । ढिलो विवाह गर्नुको कारण एउटै मात्र हुन्न । ढिलो विवाहका कारण नितान्त व्यक्तिगत पनि हुनसक्छन् । अन्य सामाजिक, राजनीतिक कारण पनि हुनसक्छन् ।
नेपालमा मोहनचन्द्र अधिकारी, रामेश, राजेश हमाल जस्ता चिनिएका व्यक्तिले ४० कटेपछि विवाह गरेका छन् । भर्खरै मात्र मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि ४० कटेपछाडि नै विवाह गरे । विवाहलाई सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिकलगायतका लगायतका कुराले फरक पार्छन् ।
विवाहमा कति उमेर फरकमा र कुन प्रक्रियाबाट विवाह गर्यो भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । अर्कोचाहिँ पारिवारिक कुराले गर्छ ।
ढिला विवाह गरेर पारिवारिक असर पर्न सक्लान् । सन्तान जन्माउने कुरामा ढिलाइ हुन्छ । यसले खासगरी महिलालाई प्रभाव पर्छ । ढिलो विवाहले परिवारमा एडजस्ट गर्न समय लाग्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिन्छन् । हुन त यी सबै कुराहरू केस, व्यक्ति, पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थितिअनुसार फरक पर्छन् ।
विवाह यही उमेरमा गरिनुपर्छ भन्ने कुनै विधान छैन । ५० वर्षअघिको समयलाई अहिलेको समयसँग तुलना गर्ने हो भने विवाहका सन्दर्भमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ । विवाहसँग जोडिएको सामाजिक मान्यताहरूमा भिन्नता देख्न सकिन्छ । यदि अरु देशसँग हाम्रो देशलाई दाँज्यो भने फरक धेरै छन् । समयअनुसार यस्ता कुरामा फरक पर्न सक्छन् ।
युरोपियन देशहरूमा विवाहभन्दा पनि लिभिङ टुगेदरमा बढी बस्ने ट्रेन्ड छ । त्यहाँका नागरिकहरूले विवाह बढी उमेरमा गर्छन् । १५ वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरमा बसेर विवाह गर्छन् । उनीहरू दुवै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् । रहर लागेर बच्चा जन्माइहाले भने पनि बच्चालाई सरकारले दिने सुविधा, सुरक्षा सबै पाउँछन् ।
हाम्रोमा भने बच्चा आमाले हुर्काएर बाउ खोजी गर्ने चलन छ । तर, त्यतातिर बच्चा कसको भन्दा पनि बच्चाले सम्पूर्ण अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड हुन्छ । राज्यले ग्यारेन्टी गरेका सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूले पनि विवाहलाई धेरै फरक पार्छ । राज्यको नीति, सामाजिक सुरक्षा नीतिहरूले फरक पार्ने केस हुन्छन् ।
धेरै उमेर ग्याप भएका दुलहा र दुलहीबीच पनि कस्ता असर पर्छन् भन्ने कुरा चासोका विषय हुन् । यसको मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ । एउटा २० वर्षको व्यक्ति र ५० वर्षको व्यक्तिले सोच्ने तौर–तरिका र सोच्ने आवेग नै फरक हुन्छ । फरक ढंगबाट सोच्ने र फरक उमेर ग्याप भएका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्दा समस्या आउन सक्छ नै ।
नेपालमा उमेर ढल्केको मान्छेलाई भर्खरको युवती विवाह गर्न रुचि हुन्छ । तर, युरोपियन देशमा त्यस्तो हुँदैन । उमेर धेरै ग्याप हुँदा पर्ने असर पनि सामाजिक दृष्टिकोण, पारिवारिक स्थिति र राज्यको नीति तथा सेवा–सुविधाले तय गर्छ ।
#४० कटेपछि रमाउने
प्रकाशित: २०७७ माघ १२ गते १२:१५